US: Booliska gobolka Utah oo dhacdo ay la yaabeen kula kulmay wadada iyo warbaahinta caalamka oo hadal-haysa – Calanka.com
US: Booliska gobolka Utah oo dhacdo ay la yaabeen kula kulmay wadada iyo warbaahinta caalamka oo hadal-haysa
Booliska gobolka Utah ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in arbacadii dhaweyd ay la kulmeen arrin “layaab ku noqotay” kaddib markii ay arkeen gabar yar oo sagaal jir ah oo gaari gacanteeda ku wadata, taa oo ay la socoto walaasheed oo afar sano jir ah.
Gabdhahani walaalaha ah ayaa saraakiisha booliska u sheegay in ay u socdeen gobolka California ee isla dalkaasi Mareykanka oo ay doonayeen “in ay ku soo dabaashaan badda”.
Qoraal la soo dhigay Twitter-ka ayay boolisku ku sheegeen in gabdhahani ay mareen laba waddo oo waaweyn, ayna ku dheceen laba baabuur oo midkood uu yahay gaari xamuul ah oo ay ka hortageen, shilkaasi oo sababay in baabuurkooga uu burburo.
Gabdhahani walaalaha ah ayaa labadooduba waxaa u xirnaa suunka badqabka ee baabuurta, sidaa awgeedna wax dhaawac ah ma uusan soo gaarin.
Waaxda booliska ee magaalada West Valley City ee gobolka Utah ayaa sheegtay in gabdhahani ay Arbacadii tooseen abaare saddexdii aroornimo, waxayna qaateen baabuur nooca Chevy Malibu ah, xilli waalidiintoodu ay jiifeen.
Qorshahoodu wuxuu ahaa sida la sheegay in ay ka tagaan gobolkaasi Utah ee aan lahayn badda oo ay aadaan gobolka California oo u jira ugu yaraan toban saacadood oo safar dhulka ah, si ay badda ugu soo dabaashaan.
Sida uu boolisku sheegay gabadha sagaal jirka ah ayaa baabuurka wadday qiyaastii 16km, ka hor inta aysan ku dhicin gaari kale. Kaddib waxay martay meel aan baabuurta loogu talagelin in ay maraan, waxa ayna markii dambe ka hortagtay baabuur xamuul ah oo ay ku dhacday.
Darawalka gaariga xamuulka ahi, oo isna aan wax dhaawac ah soo gaarin, ayaa durbaba wacay booliska kaddib markii uu arkay gaariga gabdhahani oo ku dhacay gaariga kale.
Muuqaal uu duubay kaamerada jirka ee mid ka mid ah booliska oo goobta ku sugnaa ayaa muujinayay goobta uu shilka ka dhacay iyo burburka soo gaaray gaariga ay gabdhahani yar yar wateen. Mid ka mid ah askartii booliska ahayd ee goobta timid ayaa la maqlayay isagoo leh: “waa la yaab! Gaari ayay waddaa?”.
Scott List oo ka tirsan waaxda dambi-baarista deegaanka West Jordan oo ah halka uu degganaa qoyska gabdhahani ayaa sheegay in waalidiintooda aysan xitaa ogayn in ay maqan yihiin iyo in kale ilaa booliska ay ka toosiyaan oo ay u sheegaan shilka dhacay.
“Waalidiintoodu waa ay argagaxeen oo aad ayay uga naxeen markii ay ogaadeen in carruurtoodu ay maqan yihiin,” ayuu yiri Scott oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ahi.
Waxaa jiray dhacdo kale oo tan la mid ah oo sanad ka hor ka dhacday isla gobolkaasi Utah, xilligaasi oo wiil shan jir ah uu kaxaystay baabuurka qoyskiisa, si uu u soo iibsado baabuur nooca Lamborghini-ga loo yaqaan, wuxuuna booliska u sheegaya in uu ka soo carooday gurigooda maadaama hooyadii ay u diiday in ay u soo iibsato baabuurkaasi.